तुरुन्त हेर्नुहोला, यस्तो कसैलाई नपरोस भन्दै रुदै आईन् छोरी! आमाले केटा फेरी फेरी सुत्थिन, रंगेहात भेंटे (हेर्नुस् भिडियो) – PathivaraOnline
Home > अपराध > तुरुन्त हेर्नुहोला, यस्तो कसैलाई नपरोस भन्दै रुदै आईन् छोरी! आमाले केटा फेरी फेरी सुत्थिन, रंगेहात भेंटे (हेर्नुस् भिडियो)
admin March 8, 2020 अपराध, भिडियो, समाज	0
नेपालमा घटिरहने यस्ता धेरै घटनाहरूकाे उदाहरण हाे यो । एउटी चेली जसले १० वर्षको उमेरमा आफ्नो बुवालाई गुमाईन् । कलोजोको क्यान्सरबाट ग्रषित अन्जली चेपाङका बुवाले संसार छोडेर गए । अन्जलीका बुवाको दे’हान्त पछि ५ सन्तानकि आमाले हेला गर्न र टुहराका छोरा छोरिको जस्तो व्यवहार गर्न थालिन् । बुवाको मृ’त्यु भएको १ वर्ष पश्चात आमाको व्यवहारमा अचानक परिवर्तन आउन थाल्यो । आमाले जाँ’ड र’क्सी खाएर यौ’न ध’न्दा गर्न थालीन् ।